SBS interview ob.Leencoo Baatii wojjiin taasise - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured SBS interview ob.Leencoo Baatii wojjiin taasise
SBS interview ob.Leencoo Baatii wojjiin taasise
Raadiyoon SBS biyya Awustraaliyaa tibbana oduu ODF biyya galuufi osoo hinturin gara Awurooppaatti deebi’uu isaa irratti haasawa dheeraa dubbi himaa dhaabichaa ob.Leencoo Baatii wojjiin taasiseera. Ob.Leencoon raadiyoo kanatti ODF akkamitti akka biyyatti gale, biyyatti maaltu akka isa mudateefi maaliif akka biyya guyyaa muraasa booda akka bayu taasifame irratti ibsa bal’aa laataniiru. Ob.Leencoo Baatii fundurri ODF maal akka ta’uu malu irrattis waan jedhan qaban.
Guutummaa isaa afaanuma Leencoo irraa as tuquun dhaggeeffadhaa.
Previous articleXayyaara Germanwings kan kuffise gargaaraa balaliisaa ta’uu hinoolle jedhama
Next articleOMN ob.Leencoo Lataa wojjiin wa’ee ODF irratti gaafiifi deebii bal’aa geggeesse